Fa maninona ny filoha Trump irery no afaka manavotra an'i Hawaii ankehitriny?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fa maninona ny filoha Trump irery no afaka manavotra an'i Hawaii ankehitriny?
Aprily 3, 2020
Isan'andro dia mpandeha mihoatra ny 1,000 no mbola miantsona sy miainga amin'ny seranam-piaramanidina any amin'ny Fanjakan'i Hawaii. Amin'ny maha-fanjakana nosy ary hanelingelenana amin'ny fomba mahomby ny fikorianan'ny Coronavirus eo anelanelan'ny olona avy amin'ny faritra samihafa dia ilaina ny mampiato an'io fikorianana io. Hawaii dia iray amin'ireo toerana fitsangatsanganana sy fizahantany indrindra eto amin'izao tontolo izao. Mamono vonjimaika ny toekarem-panjakana ny fijanonana ny fizahantany.
Ny fampijanonana ny fizahan-tany sy ny dia ihany koa no mety ho fitaovana tokana hanavotana ity indostria manan-danja ity ka Aloha Afaka mandray ireo mpitsidika indray ny fanjakana amin'ny tànana malalaka.
Hawaii dia manana tombony mazava mihoatra ny Etazonia Etazonia. Hawaii dia fanjakana nosy ary azo atokana.
Betsaka ao Hawaii no niangavy ny Ben'ny tanàna sy ny Governora mba hampitsahatra an'io risika tsy ilaina io. Rehefa nandray ny andraikitra ny ben'ny tanànan'i Honolulu, Kirk Caldwell, dia vondrona maro, anisan'izany ny mpamaky HawaiiNews.online, mpikambana ao amin'ny Vondron'ny vondrom-piarahamonina North Shore any Oahu, LGBT Hawaii , Monina any Hawaii Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany, ary koa ny mpiasa ao amin'ny eTurboNews nanatevin-daharana ny fanerena ny fanjakana hanamora izany.
Nilaza ny governoran'i Hawaii Ige eTurboNews herinandro lasa izay dia ny filoham-pirenena ihany no afaka mametraka izany fepetra izany. Hawaii dia 3 no isan'ny distrika ary 4 ny ben'ny tanàna. Niara-nientana androany ireo ben'ny tanàna ireo mba hamporisika ny filoha Trump hamonjy an'i Hawaii sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany
Ny ben'ny tanàna Kirk Caldwell, Derek Kawakami, ary Mike Victorino dia nandefa taratasy tany amin'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump androany mba hangataka azy ireo hampitsahatra ny dia tsy ilaina rehetra tonga any Hawaii amin'ny ezaka hampitsaharana ny fiparitahan'ny COVID-19 (coronavirus).
Ny quarantine mandatory efatra ambin'ny folo andro an'ny governoran'i Hawaii David Ige dia mihatra amin'ny mpitsangatsangana amin'ny nosy rehetra. Ny kaomandy eo amin'ny nosy dia manitatra ny kaomandin'ny quarantine an'ny 26 martsa ho an'ny mpandeha rehetra any ivelany.
"Maui County no hany distrika ahitana nosy telo samy hafa," hoy ny ben'ny tanàna Michael Victorino. "Tokony ho azontsika antoka fa mbola hahazo loharano sy serivisy ilaina i Maui, Molokai, ary Lanai fa voaaro amin'ny fihanaky an'io virus io ihany koa."
"Vantany vao tapitra io krizy io, dia te-ho vonona hanokatra ny nosinay izahay ho an'ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao," hoy ny ben'ny tanàna Caldwell. “Saingy ny fijanonana tanteraka amin'ny fitsangatsanganana tsy ilaina rehetra tonga eto amin'ny fanjakantsika dia manakana ny fisorohana ity virus ity, indrindra fa ny ankamaroan'ny tranga COVID-19 any Hawaii dia misy ifandraisany amin'ny dia. Ankoatr'izay, ny mpitsidika toy izany dia miteraka enta-mavesatra ho an'ireo mpandray valiny voalohany tamin'ny fotoana ilantsika azy ireo hifantoka amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19. ”
"Rehefa mihetsika ny olona dia mihetsika ny viriosy ary mila fanampiana amin'ny sehatra isan-tsokajiny isika mba hampihenana ny hetsika mba hahafahantsika miverina amin'ny ara-dalàna," hoy ny ben'ny tanàna Derek Kawakami, "Tsy fotoana tokony hanaovana dia lavitra izao. Manana fotoana tsy manam-paharoa i Hawaii hampiatoana ny fiparitahan'ny virus haingana eto amintsika, ary mangataka ny fanampian'ny filoham-pirenena izahay hanatanterahana izany. ”
Hatramin'ny 1 aprily 2020, i Hawaii dia manana tranga miabo 258 amin'ny COVID-19. Androany, hitan'i Hawaii ny fiakarana lehibe indrindra amin'ny tranga iray andro hatreto, miaraka amin'ny tranga 25 vaovao ao Oahu, ary tranga 34 vaovao manerana ny fanjakana. Hawaii ihany koa dia niaritra ny fahafatesany voalohany tamin'ny COVID-19, izay antenaina kokoa ny manaraka.
Ho fanampin'izany, ny ivon-toerana miantso ny City sy County of Honolulu COVID-19 dia hijanona misokatra mandritra ny sisa amin'ity herinandro ity manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 5 hariva isan'andro. Entanina ny mponina ao Oahu hitsidika ny tranokala, oneoahu.org hahazoana valiny amin'ny fanontaniana napetraka matetika momba ny Ben'ny tanàna Caldwell's Stay at Home Order.
Vaovao mahafaly momba ny Coronavirus avy any Alemana: mirongatra ny curve!
Manam-pahaizana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko no manamarika ny fiakaran'ny 44%
Vaovao momba ny dia any Belize
Belize dia nanala ny fampiasana ny Belize Travel Health App alohan'ny hahatongavanao